सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी र भारतीय नागरिकबीच झडप, ४ राउण्ड गो-ली चल्यो, केछ अवस्था ? — Sanchar Kendra
सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी र भारतीय नागरिकबीच झडप, ४ राउण्ड गो-ली चल्यो, केछ अवस्था ?
काठमाडौं । झापाको नेपाल भारतस्थित सीमा क्षेत्रमा भारतीय नागरिक र सशस्त्र प्रहरीबीच झडप भएको छ। जिल्ला प्रहरी झापका अनुसार गौरीगञ्ज गाउँपालिकासँग सीमा जोडिएको नेपाल–भारत सीमावर्ती क्षेत्रमा झडप भएको हो।
गौरीगञ्ज गाउँपालिका–५ मलाहका टोल नजिकैको सीमा क्षेत्रमा शनिबार राति नेपाल प्रवेश गर्न हात-हतियारसहित आएका भारतीय नागरिकलाई सशस्त्र प्रहरीले रोक्न खोज्दा झडप भएको हो।
सीमावर्ती भारतीय गाउँबाट घरेलु हतियारसहित आएको समूहले सशस्त्र प्रहरीमाथि आक्रमण गरेपछि भिडलाई नियन्त्रणमा लिन सशस्त्र प्रहरीले ४ राउण्ड हवाई फायर गरिएको जिल्ला प्रहरी झापाले जनाएको छ।
सशस्त्र प्रहरीको केन्द्रय प्रवक्ता प्रवीणकुमार श्रेष्ठले झापामा भारतीय नागरिकहरु रातको समयमा नेपाल प्रवेश गर्न खोज्दा झडप भएको र सशस्त्र प्रहरीले उनीहरुलाई भगाएको बताए। उनका अनुसार त्यसक्रममा दुई प्रहरी घाइते भएको समेत बताए। जिल्ला प्रहरी झापाबाट पनि त्यसक्षेत्रमा प्रहरी खटिएको झापाका एसपी कृष्ण कोइरालाले जानकारी दिएका छन्।
यसअघि शनिवार पर्साको ठोरीमा भारतीय नागरिकहरुले सीमा स्तम्भ उखालेर फालेको विषयमा पनि विवाद भएको थियो। सशस्त्र प्रहरीका अनुसार सीमा स्तम्भ १५२ नजिकै घटना भएको थियो। भारतीय पक्षको आक्रमणबाट दुई सशस्त्र प्रहरी जवान सामान्य घाइते भएका छन्।
यसैबीच उता पर्साको ठोरी गाउँपालिका–२ स्थित सीता गुफाको शिरमा रहेको पिलर (सीमा स्तम्भ) फेरि सोही स्थानमा गाडिएको छ । शनिबार दिउँसो ४३६ नम्बर पुरानो ठूलो पिलर ढलेको अवस्थामा फेला परेको थियो । सशस्त्र प्रहरी बल बोर्डर आउट पोस्ट ठोरीका प्रहरी निरीक्षक दीपक दाहालले शनिबार दिउँसो ढलेको अवस्थामा फेला परेको पिलर पुन: यथास्थितिमै गाडिएको बताए ।
सीता गुफाको शिरमा रहेको पिलर ढलेको अवस्थामा फेला परेपछि ठोरीवासीले विरोध गरेका थिए । भारतीय सीमा सुरक्षा बल, ठोरी गाउँपालिका अध्यक्ष र सुरक्षा निकायले निर्णय गरेपछि यथास्थितिमै पिलर गाडिएको हो । ‘भारततिरको दशगजामा यथास्थिति भन्दा ५ मिटरको दूरीमा पिलर ढलेको अवस्थामा थियो,’सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक दाहालले भने, ‘सबै पक्षको सहमतिमा पुरानै ठाउँमा शनिबार राति ९ बजेतिर गाडियो ।’
ठोरी गाउँपालिका अध्यक्ष पदमलाल श्रेष्ठले दुवै देशका सुरक्षा निकायको रोहबरमा ढलेको पिलर यथास्थितिमा गाडिएको बताए । प्रधानमन्त्रीको केपी शर्मा ओलीको भगवान रामबारेको अभिव्यक्तिपछि एकाएक चर्चामा आएको ठोरीको सीतागुफा परिसरमा शनिबार स्थानीयले विशेष पूजा अर्चना गरेका थिए । ठोरीको सीता गुफा, वनशक्ति मन्दिर, कृष्ण मन्दिरलगायतका शक्तिपीठहरुमा स्थानीयले पूजा गरेका हुन् ।